eHimalaya Online || News from nepal » यी ४ राशिका मानिसहरुको जीवन संघर्षले भरिएको भएपनि पैसाको अभाव भने कहिल्यै हुदैन जानौ कतै तपाइको राशि चिन्ह त हैन ?
यी ४ राशिका मानिसहरुको जीवन संघर्षले भरिएको भएपनि पैसाको अभाव भने कहिल्यै हुदैन जानौ कतै तपाइको राशि चिन्ह त हैन ?
२०७८ भदौ ८ गते मङ्गलबार ०३:११
त्यहाँ धेरै यस्ता हितोपदेशहरु छन् जसमा यो भनिएको छ कि यदि जीवन मा संघर्ष छैन, तब जीवन अर्थहीन मानिन्छ। हाम्रो जीवन मा उतार चढावहरु छन्, यो संघर्षले हामीलाई जिउनको लागी सिकाउँछ। केहि मानिसहरु को जीवन मा समस्याहरु मात्र नाममा छन्,...
त्यहाँ धेरै यस्ता हितोपदेशहरु छन् जसमा यो भनिएको छ कि यदि जीवन मा संघर्ष छैन, तब जीवन अर्थहीन मानिन्छ। हाम्रो जीवन मा उतार चढावहरु छन्, यो संघर्षले हामीलाई जिउनको लागी सिकाउँछ। केहि मानिसहरु को जीवन मा समस्याहरु मात्र नाममा छन्, जबकि केहि मानिसहरुको जीवन संघर्ष को अर्को रूप बन्छ।
कसरी एक व्यक्तिको जीवन अगाडि बढ्नेछ धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। प्राय: हामी हाम्रो वरपर देख्छौं कि धेरै मानिसहरु लाई कुनै विशेष समस्या बिना जीवन मा सजिलै संग सफलता प्राप्त हुन्छ, अर्कोतर्फ धेरै मानिसहरु सबै प्रयासहरु गरे पछि मात्र निराश हुन्छन्। ज्योतिष को अनुसार, हामी सबै १२ राशिहरु मा विभाजित छौं र कुन राशी को हामी संग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो जीवन मा एक विशेष प्रभाव छ।
ज्योतिषीहरुका अनुसार, केहि यस्ता राशीहरु छन् जसको कारण व्यक्तिको जीवनमा समस्या आउँछ, तर साथसाथै उनीहरुलाई सफलता पनि मिल्छ। हामी तपाईलाई थाहा दिन्छौ कि ती राशिहरु कस्ता छन्, जसको साथ उनीहरु संग सम्बन्धित व्यक्तिहरु आफ्नो जीवन मा सबै बाधाहरु लाई हटाए पछि सफलता को स्वाद लिन्छन्।
मिथुन: मिथुन राशि का मानिसहरु अद्वितीय प्रतिभा मा धनी छन्, उनीहरु आफैंले हरेक कार्य पूरा गर्न सक्षम छन्। यो देखीएको छ कि यस राशिका मानिसहरु जन्म देखि नै धेरै प्रतिभाशाली छन्, उनीहरु लाई पैसा को कुनै कमी छैन, तर उनीहरुका साना गल्तीहरु को कारण, उनीहरु अरु भन्दा पछाडि छन्। यस राशिका मानिसहरु प्राय आफ्नो समय अरु भन्दा अरुको बारेमा सोच्ने गरी ब,र्बाद गर्छन्। मिथुन राशिका मानिसहरु सानो सानो कुरामा पनि चिन्तित हुन्छन्, उनीहरु विषम परिस्थितिमा छिट्टै नर्भस हुन्छन्। यी कमजोरीहरु को कारण, उनीहरु आफैलाई समस्या मा पाउँछन्। विद्वानहरुका अनुसार, यद्यपि यस राशिका मानिसहरु आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्, तब सफलता उनीहरुको पाइलाहरुमा हुनेछ।
तुला: तुला राशिका मानिसहरुलाई धेरै बुद्धिमानी मानिन्छ, यो प्राय भनिन्छ कि उनीहरु आफ्नो बुद्धिमत्ता संग जो कोहिलाई माथ दिन सक्छन् र आफ्नो बुद्धि को आधारमा पैसा कमाउन सक्छन्। सबैजना आफ्नो व्यक्तित्व को विश्वस्त छन्, तर तुला राशिका मानिसहरु आफ्नै गल्ती को शि,कार बन्छन्। तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यो हो कि उनीहरु आफ्नो समय को कदर गर्न सक्षम छैनन्, उनीहरु उपस्थिति मा आफ्नो बहुमूल्य समय ब,र्बाद गर्छन्। उनीहरु समय बित्दै जाँदा पछुताउँछन्। ज्योतिषीहरु को अनुसार, ठोकर खाए पछि, तुला राशिका मानिसहरु राम्रो बन्छन् र आफ्नो साँचो मेहनत संग आफ्नो जीवन को लक्ष्य कोण प्राप्त गर्दछन्।
धनु: ज्योतिष शास्त्रका विज्ञहरुका अनुसार यस राशिका मानिसहरु लाई धेरै सोच्ने बानी हुन्छ, जसको कारण उनीहरुको काम पनि पूरा हुन पाउदैन । धनु राशि भएका मानिसहरु प्रतिभाशाली हुन्छन् तर उनीहरु एकै पटकमा धेरै कार्यहरुमा संलग्न हुन्छन्, जसको कारण उनीहरु समस्यामा पर्ने गर्छन । यो प्राय देखिएको छ कि यस राशिका मानिसहरु धेरै चाँडै मा,नसिक समस्यामा परेका छन्। यस्तो स्थिति मा, धनु राशिका मानिसहरु को लागी ज्योतिषको सल्लाह दिइन्छ कि यदि उनीहरु आफ्नो दिमाग केन्द्रित गर्दछन् र केवल एक दिशा मा काम गर्छन्, तब उनीहरुलाई अप्रत्याशित मौद्रिक लाभ प्राप्त हुनेछ।
मकर: यो मानिन्छ कि मकर राशिका मानिसहरु लाई सबै प्रकारका सुविधाहरु छन्, तैपनि उनीहरुलाई संघर्ष को सामना गर्नु पर्छ। यस राशिका मानिसहरुको दुश्मन अरु कोहि नभई उनीहरुको आलस्यपन नै हुन । भविष्य मा काम स्थगित गर्ने प्रवृत्ति को कारण, उनीहरु लाई जीवन मा धेरै समस्याहरु बाट गुज्रनु पर्छ। यदि यस राशिका मानिसहरु आफ्नो आलस्य त्याग्छन्, तब उनीहरु जीवन मा पहिले भन्दा धेरै प्रगति प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्रकाशित मिति २०७८ भदौ ८ गते मङ्गलबार ०३:११
यस्तो ह,ट अवतारमा मुसुक्क मुस्कुराएर लठ्ठ पारिन फ्यानहरुलाइ अभिनेत्री जान्भी कपुरले। हेरौ यी १४ तस्बिरमा।